Forex ဇယားများကိုမည်ကဲ့သို့ဖတ်ရမည်နည်း၊ အစပြုသူများမီးခွက်များ၊ လိုင်းနှင့်ဘားဇယားများလမ်းညွှန်
ပညာရေး - ဆောင်းပါးများနှင့်သင်ခန်းစာများ - Forex အခြေခံဆောင်းပါးများ - Forex ဇယားများကိုမည်သို့ဖတ်ရမည်နည်း
Forex ၏အရောင်းအဝယ်လောကတွင်အရောင်းအ ၀ ယ်မစတင်မီဇယားများကို ဦး စွာလေ့လာရမည်။ ၎င်းသည်ငွေလဲလှယ်နှုန်းနှုန်းနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုဆိုင်ရာခန့်မှန်းချက်အများစုကိုပြုလုပ်သည့်အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်ပြီး၎င်းသည်ကုန်သည်၏အရေးအပါဆုံးကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ Forex ဇယားတွင်၊ သင်တို့၏ငွေကြေးကွာခြားမှု၊ ငွေလဲနှုန်းနှင့်လက်ရှိစျေးနှုန်းသည်အချိန်နှင့်အမျှပြောင်းလဲနေသည်ကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ ဤစျေးနှုန်းများသည် GBP / JPY (ဗြိတိန်ပေါင်မှဂျပန်ယန်းအထိ) မှ EUR / USD (ယူရိုအထိအမေရိကန်ဒေါ်လာ) နှင့်သင်ကြည့်ရှုနိုင်သည့်အခြားငွေကြေးအတွဲများအထိရှိသည်။
Forex ဇယားကိုသတ်မှတ်သည် အမြင်အာရုံပုံဥပမာ အထူးအချိန်ကာလတစ်ခုအတွင်းတွဲဖက်ထားသောငွေကြေးများ၏စျေးနှုန်း။
၎င်းသည်မိနစ်၊ နာရီ၊ ရက်၊ ရက်သတ္တပတ်များစွာအကြားတွင်ပင်ကုန်သွယ်မှုကာလတစ်ခုအတွက်ကုန်သွယ်မှုကာလတစ်ခုအတွက်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေမှုများကိုပုံဖော်သည်။ စျေးနှုန်းပြောင်းလဲမှုသည်ကုန်သည်များအနေနှင့်မည်သူမျှတိတိကျကျမျှော်လင့်နိုင်သည့်အချိန်ကျသည့်အချိန်တွင်ဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ထိုကဲ့သို့သောအရောင်းအ ၀ ယ်များ၏အန္တရာယ်များကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်း။ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသင့်သည်။ ဤတွင်သင်ဇယား၏အကူအညီလိုအပ်လိမ့်မည်။
စျေးနှုန်းများပြောင်းလဲခြင်းကိုနားလည်နိုင်ရန်အတွက်ဇယားကွက်များကိုအသုံးပြုရန်အလွန်လွယ်ကူသည်။ ဇယားတွင်၊ ငွေကြေးအမျိုးမျိုးမည်မျှရွေ့လျားနေသည်ကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်၊ သင်တစ် ဦး တည်းသောအချိန်တွင်တက်ရန်သို့မဟုတ်တက်ရန်အလားအလာကိုသိရှိနိုင်သည်။ ဒါဟာပုဆိန်နှစ်ခုနှင့်အတူလုပ်ဖို့ရှိပါတယ် y ၀ င်ရိုး ဒေါင်လိုက်ခြမ်းတွင်ရှိနေပြီး၎င်းသည်အလျားလိုက်ဘက်တွင်ရှိသောအချိန်ကိုဖော်ပြနေစဉ်၎င်းသည်စျေးနှုန်းကိုဆိုလိုသည် ၀ င်ရိုး.
အရင်တုန်းကလူတွေဟာဇယားဆွဲရန်လက်ကိုအသုံးပြုခဲ့ကြပေမယ့်ဒီနေ့ခေတ်မှာသူတို့ကိုဆွဲဆောင်နိုင်သောဆော့ဖ်ဝဲများရှိသည် ညာဘက် left အဆိုပါတလွှား ၀ င်ရိုး.
ဈေးနှုန်းဇယားသည် ၀ ယ်လိုအားနှင့်ရောင်းလိုအားကွဲပြားမှုကိုပြပြီးစုစုပေါင်းဖြစ်သည် သင်၏ကုန်သွယ်မှုအရောင်းအဝယ်တစ်ခုချင်းစီ အချိန်တိုင်း။ ဇယားတွင်သင်တွေ့ရမည့်သတင်းဆောင်းပါးအမျိုးမျိုးရှိပြီး၎င်းတွင်အနာဂတ်သတင်းများနှင့်မျှော်လင့်ချက်များလည်းပါ ၀ င်သည်။ ကုန်သည်များက ၄ င်းတို့၏စျေးနှုန်းများကိုချိန်ညှိနိုင်သည်။ သို့သော်သတင်းသည်အနာဂတ်တွင်ဖြစ်ပျက်လာမည့်အရာနှင့်ကွဲပြားနိုင်သည်။ ဤအချိန်တွင်ကုန်သည်များသည်ထပ်မံပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများပြုလုပ်ပြီးသူတို့၏စျေးနှုန်းများကိုပြောင်းလဲလိမ့်မည်။ သံသရာဆက်လက်အဖြစ်ဤသည်အပေါ်နှင့်ပေါ်တတ်၏။
လှုပ်ရှားမှုများစွာသည် algorithms များ (သို့) လူသားများမှလာသည်ဖြစ်စေ၊ ဇယားသည်၎င်းကိုရောနှောသည်။ ဤနည်းအတိုင်းပင်သင်သည်သင်၏ဇယားတွင်သတင်းအချက်အလက်များကိုတင်ပို့သူ၊ ဗဟိုဘဏ်၊ AI သို့မဟုတ်လက်လီရောင်းဝယ်သူများထံမှသူတို့၏အရောင်းအ ၀ ယ်များနှင့် ပတ်သက်၍ ကွဲပြားခြားနားသောအချက်အလက်များကိုတွေ့လိမ့်မည်။
Forex တွင်ဇယားပုံစံအမျိုးမျိုးရှိသော်လည်းအသုံးအများဆုံးနှင့်ကျော်ကြားသည်မှာ လိုင်းဇယား, ဘားဇယားနှင့် မီးခုံဇယား.
လိုင်းဇယားသည်အလွယ်ကူဆုံးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ပိတ်သောစျေးနှုန်းများနှင့်ချိတ်ဆက်ရန်မျဉ်းကြောင်းဆွဲသည်။ ဤနည်းအားဖြင့်တွဲဖက်ထားသောငွေကြေးများ၏အချိန်နှင့်အမျှမြင့်တက်ခြင်းနှင့်ကျဆင်းခြင်းကိုဖော်ပြသည်။ လိုက်နာရန်လွယ်ကူသော်လည်းကုန်သည်များအနေဖြင့်စျေးနှုန်းများ၏အမူအကျင့်နှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းအချက်အလက်အလုံအလောက်မပေးပါ။ သင်ကစျေးနှုန်း X မှာအဆုံးသတ်နှင့်ထို့ထက်ပို။ ဘာမျှမသောကာလပြီးနောက်သာထွက်ရှာတွေ့လိမ့်မည်။
သို့သော်၎င်းသည်ခေတ်ရေစီးကြောင်းကိုအလွယ်တကူကြည့်ရှုရန်နှင့်မတူညီသောအချိန်ကာလ၏စျေးနှုန်းများပိတ်ခြင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်ရာတွင်သင့်အားအထောက်အကူပြုသည်။ လိုင်းဇယားဖြင့်အောက်ဖော်ပြပါ EUR / USD ဥပမာတွင်ကဲ့သို့စျေးနှုန်းများ၏လှုပ်ရှားမှုကိုခြုံငုံသုံးသပ်နိုင်သည်။
လိုင်းဇယားနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ဘားဇယားများသည်အတော်အတန်ရှုပ်ထွေးသော်လည်း၎င်းသည်လုံလောက်သောအသေးစိတ်အချက်အလက်များပေးရာတွင်လိုင်းထက်သာသည်။ ဘားကားချပ်များသည်ငွေကြေးအားလုံးအတွက်ဖွင့်ခြင်း၊ ပိတ်ခြင်း၊ မြင့်မားခြင်းနှင့်စျေးနှုန်းနိမ့်ခြင်းများကိုမြင်နိုင်သည်။ ငွေကြေး ၀ န်ဆောင်မှု၏အထွေထွေကုန်သွယ်မှုပမာဏကိုကိုယ်စားပြုသောဒေါင်လိုက် ၀ င်ရိုး၏အောက်ခြေတွင်အမြင့်ဆုံးသည်ထိပ်ဆုံးတွင်ရှိပြီးထိုအချိန်တွင်ကုန်သွယ်မှုနိမ့်ဆုံးစျေးကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။
အလျားလိုက် hash သည် bar ဇယား၏ဘယ်ဘက်ခြမ်းနှင့်အဖွင့်ဈေးနှုန်းတို့ကိုညာဘက်အခြမ်းတွင်ဖော်ပြထားသည်။
EUR / USD အတွဲအတွက်အောက်ဖော်ပြပါဇယားသည်သင့်အားဘားဇယား၏ပုံသဏ္goodာန်ကောင်းကိုပြသပါမည်။
မီးခုံဇယားများသည်အခြား Forex ဇယားများကဲ့သို့ပင်မြင့်မားသောသို့နိမ့်သောကုန်သွယ်မှုပမာဏကိုပြသရန်ဒေါင်လိုက်မျဉ်းကြောင်းကိုအသုံးပြုသည်။ အလယ်၌သင်တွေ့လိမ့်မည်လုပ်ကွက်အများအပြားရှိပါတယ်, အဖွင့်နှင့်ပိတ်ပွဲစျေးနှုန်းအကွာအဝေးကိုပြသ။
အရောင် (သို့) ဖြည့်ထားသောအလယ်တန်းအတုံးသည်ဆိုလိုသည်မှာa၏နိဂုံးဖြစ်သည် ငွေကြေးတစ်စုံ ၎င်း၏အဖွင့်စျေးနှုန်းထက်နိမ့်သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ အလယ်တည့်တည့်မှာကွဲပြားသောအရောင်ရှိလျှင်သို့မဟုတ်ဖြည့်စွက်ခြင်းမရှိပါက၎င်းသည်သူဖွင့်လိုက်သောစျေးထက်ပိုမိုမြင့်မားသောစျေးနှုန်းဖြင့်ပိတ်လိုက်သည်။
မီးခုံဇယား Read လုပ်နည်း
မီးခုံပုံဇယားကိုဖတ်ရန်ပထမပုံစံသည်ပုံစံနှစ်မျိုးဖြင့်လာသည်ကို ဦး စွာနားလည်ရမည်။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းရောင်းသူနှင့်ဝယ်ဖယောင်းတိုင်။
ဤဖယောင်းတိုင်ဖွဲ့စည်းမှုနှစ်ခုသည်ကုန်သည်တစ် ဦး အနေဖြင့်သင့်အားအလွန်အရေးကြီးသောသတင်းအချက်အလက်များကိုပေးသည်။ ဤရွေ့ကားပါဝင်သည်:
ရံဖန်ရံခါအဖြူရောင်ဖြစ်သောအစိမ်းရောင်ဖယောင်းတိုင်သည် ၀ ယ်သူကိုကိုယ်စားပြုပြီး ၀ ယ်သူကသတ်မှတ်ထားသောအချိန်တွင်အောင်နိုင်ခြင်းရှိကြောင်းရှင်းပြသည်။ အနိမ့်ဆုံးဈေးနှုန်းသည်အဖွင့်ဈေးထက်မြင့်သည်။
အကယ်၍ သင်သည် Forex ၏လုပ်ရပ်များကိုမသိလျှင်၊ သင်အမှားအယွင်းများစွာကျူးလွန်မိနိုင်ပြီးထိုသို့မဖြစ်စေရန်ပထမအဆင့်မှာဇယားများကိုမည်သို့ဖတ်ရမည်ကိုသိရန်ဖြစ်သည်။ Forex ဇယားမြောက်များစွာရှိသည်။ သို့သော်ဤနေရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့အလေးပေးဖော်ပြခဲ့သည့်အချက်သုံးချက်သည်ထိပ်ဆုံးဖြစ်သည်။ သင်မည်သည့်နေရာတွင်မဆိုသင်နှင့်လိုက်ဖက်ပြီး Forex ၏ကမ္ဘာသို့မ ၀ င်မီဇယားများမည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုနားလည်နိုင်သည်။